UPJ Powers – The Ulwazi Programme
U-Penelope Jane Dunlop owaziwa nangokuthi u-PJ Powers noma uThandeka wazalwa ngo-1960 eThekwini. Ujabulele umsebenzi wezomculo ophumelele kakhulu eNingizimu Afrika ohlanganisa iminyaka engaphezu kwengu-15, phakathi naleso sikhathi ubengomunye wabaculi bezokungcebeleka abambalwa abeqe imigoqo yamasiko futhi wathandwa ngababukeli abamnyama nabamhlophe ngokufanayo. U-P J Amandla waziwa kakhulu ngokulwa nobandlululo nobushoshovu, ukukhuthaza amalungelo abantu kanye nokupha abantu okuhle.
U-PJ Powers uqophe ama-albhamu ayi-15 futhi waziwa kakhulu ngengoma yakhe eyashisa izikhotha e-UK i-World In Union (neLadysmith Black Mambazo) ngo-1995. Ngo-1988, u-PJ wavinjelwa emsakazweni nakuma-TV unyaka owodwa nguhulumeni wobandlululo ngenxa yokusebenza kwakhe esizeni senhlangano ikhonsathi yezintandane zempi eZimbabwe, kanye no-Miriam Makeba no-Harry Belafonte.
Wakhuthazeka ukuthi aqhubeke nokucula kwakhe ngu-Nelson Mandela, owamthumelela incwadi ekhuthazayo evela ejele lase-Victor Verster eKapa. Amandla abandakanyeke kakhulu kwi-Reach For a Dream Foundation, kanye ne-Hamlet Foundation. Ngo-2014 u-PJ Powers wethule incwadi yakhe esihloko sithi-Here I am.